सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी: मोटर बिमाको भरपर्दो गन्तव्य - InHeadline
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी: मोटर बिमाको भरपर्दो गन्तव्य
By Anu Rana on Nov 14,2018 - 10:44
मोटर बिमामा सरकारले तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरिदिएको छ । अहिलेको परिवेशमा मोटरको चढ्नेको संख्या बढ्दै गएको हुनाले देशमा हुने दुर्घटनाको क्रम पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसैले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि मोटर बिमा आवश्यक पर्छ । मोटर खरिद गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसको सुरक्षाको लागि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले मोटर बिमा ल्याएको छ। अन्यथा कहिलेकाहीँ मोटर दुर्घटनाले ठूलो संकट पनि निम्ताउँदछ । जसले जन र धनको पनि क्षति हुन्छ । त्यसैले मोटर खरिदसँगै मोटर बिमा पनि गर्न आवश्यक पर्छ ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मोटर बिमा समबन्धी बिभिन जोखिम बहन गर्छ ?
मोटर बिमाअन्तर्गतको तेस्रो पक्ष बिमाले तपार्इंको सवारी साधनले अर्को साधनलाई ठक्कर दिई क्षति पु¥याएमा, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएमा वा मानिसलाई चोटपटक पु¥याएमा आइपर्ने आर्थिक संकटमा सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
यस योजना तेस्रो पक्षको दाबी भुक्तानी गर्छ । त्यस्तै, प्याकेज बिमाले तपाईंको सवारी साधनमा क्षति पुगेमा भुक्तानी गर्छ । जस्तै, दुर्घटनाबाट तपाईंको मोटर क्षतिग्रस्त भएमा, खोलाले बगाएमा, भूकम्पले क्षति पु¥याएमा, पैरोले पुरेमा आवश्यक पर्ने रकम कम्पनीले बेहोर्छ ।
यसका साथै यात्रुपक्ष बिमा र चालक, सहचालक बिमाले दुर्घटनाबाट यात्रुपक्ष वा चालकदलाई चोटपटक लागेमा क्षतिपूर्ति दिन्छ । त्यस्तै, तपाईंले चाहनुभएमा यस योजना हुलदंगा जोखिम पनि बहन गर्छ ।
मोटर बिमा कसरी गर्न सकिन्छ ?
मोटर बिमा गर्नुअघि कम्पनीको प्रस्ताव फारम भर्नुपर्छ । कम्पनीहरूको वेबसाइटमा पनि यस्तो फारम उपलब्ध हुन्छ । त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर पनि भर्न सकिन्छ । त्यो फारम बिमा कम्पनीमा बुझाउनुपर्छ ।
सवारी साधनको ब्लुबुकअनुसार बिमा योजना निर्धारण हुन्छ । साथै सवारी धनीले एउटा केवाइसी फारम पनि भर्नुपर्छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि १० देखि १५ मिनेटमा नै बिमा योजना जारी हुन्छ ।
सिद्धार्थ बीमा कम्प्लेक्स, चौथो तल्ला,
बाबरमहल (हनुमानंथान), काठमाडौं
०१-५७०५७६/ ५७०७१९०/ ५७०५४४७/५७०५९८३
ट्याग - सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी , मोटर बिमा